बिबाहको ढोका बन्द गरि हिमालको ढोका खुलाउने सहासी महिला 'माया' ! - ParyatanBazar.com
बिबाहको ढोका बन्द गरि हिमालको ढोका खुलाउने सहासी महिला ‘माया’ !
माया गुरुङ न नेपालीको लागि नयाँ नाम हो , न त हिमाल कै लागी। माया गुरुङ लाई सगरमाथा देखि लिएर जुगल , युवा पिक, तिलमान पास सबैले नै चिन्छन्। नचिनुन् पनि कसरी यी हिमालहरूमा मायाले हिम्मत र हौसलाको सुगन्ध जो छाडेर आएकी छन्।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको धापमा जन्मिएकी उनी बच्चै देखि हिमालकी पारखी थिइन। हरेक दिनको सुरुवात हिमालका हिउँमा घाम छाडेको आफ्नो प्रकाशलाई हेर्दै हुने गर्थ्यो।
त्यस समय उनलाई विश्वमा एउटा मात्र हिमाल छ जस्तो लाग्थ्यो , अनि आफै कल्पिन्थिन हिमाल त यहीँ नजिक छ तर चढ्ने मान्छे चाहिँ किन नआएका होलान् ? आए भने पनि कुन बाटो बाट जान्छन् होला ?
बाल्यकाल सामान्य तरिकाले बिताएकी उनले बिद्यालय मा भने बडो गफ दिन्थिन , तिमीहरूलाई थाहा छ मेरो घर बाट त सगरमाथा देखिन्छ ! उनले जब गफ दिन्थिन सब उनको कुरा ध्यान दिएर सुन्थे। सानै देखि हिम्मतिली र चुनौती लिने सँगै खरो स्वभाव कि उनी सधैँ सगरमाथामा एक दिन पुगेरै छाड्ने अठोट गर्थिन।
जब उनी १३ वर्षकी थिइन् उनलाई जवर्जस्ती बिहे गर्न भनियो तर मायाले उनको जीवनकै पहिलो युद्ध लडिन विवाह नगर्ने। उनको कुरा सुनिदिने कोही थिएन त्यस समय , बुवाले नै विवाह गर्न दबाब दिएपछि युद्धको नतिजा सार्वजनिक गर्दै उनी घरबाट भागिन !
जुन समयमा उनी भागिन न उनी सँग कुनै लक्ष्य थियो न त विवाह भनेको के हो त्यसको ज्ञान , थियो त एउटै कुरा सगरमाथा चढ्ने।
धेरै कल्पना गर्ने मायाले पासाङ लाम्हु शेर्पा मर्दा पनि आफ्नै किसिमको कल्पना गरेकी थिइन्। पक्कै पनि यो हिमालको यता पट्टि बाट चाहिँ उनको खुट्टा चिप्लियो होला अनि लड़ीन होला। त्यति मात्र कहाँ हो र , पासाङ मर्दा उनी पनि रोएकी थिइन्।,
जब उनी घरबाट भागेर काठमाडौँ छिरिन तब देखि नै उनको सङ्घर्ष सुरु भयो। “१४ वर्ष देखि नै मैले एक्लै सङ्घर्ष गर्न सुरु गरेँ , घर छाडेर आएपछि धेरै समस्या पनि भयो ” उनले भनिन। पछि आमाले म पढाउँछु आइज घर भनेपछि म घर गएँ , आमाले मलाई साथ दिनुभयो।
सङ्घर्ष र सङ्घर्ष पछिको मिठो पल चाहिँ आफूले गरिरहेको काम पुरा भएपछि हुँदो रहेछ , हिमाल चढ्नु अघि फेसन डिजाइनरको कोर्स गर्दा चोलो सिलाउँदाको खुसी साट्दै मायाले भनिन।
एक वर्षको तयारी पछि फ़ाइनल्लि दिन आयो सपनाको हिमाल चढ्ने। धेरै उत्साह , अलिकति डर , र हिमाल चढेरै छाड्ने १०० प्रतिशतको विश्वास का साथ उनी हान्नीइन लुक्ला तर्फ !
जब जब उनका पाइला अघि बढ्दथे तब तब उनी आफ्नो सङ्घर्ष लाई सम्झेर मुस्कुराऊँ थिन।
१ दिन २ दिन गर्दै दिन आयो चुचुरो चुम्ने , हिलारी स्टेपमा पुगेपछि दुर्भाग्यवश उनी १ / डेढ घण्टा नै जाममा परिन। हिउले आँखा खान्छ,नाक खान्छ कि भन्ने डर त उनको मनमा छदै थियो तर हार खान उनी राजी थिइनन्। यो स्टेप भनेको सबैभन्दा खतरनाक स्टेप भन्ने पनि बुझिन्छ , जहाँ बाट धेरै मान्छेहरू फर्कन बाध्य हुन्छन् मायाले सुनाइन।
२ घण्टा सम्म पर्खिँदा पनि ट्राफिक जाम नखुलेपछि उनले पछि नहट्ने र आफ्नो बच्चा देखिको सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई अधुरो रहन नदिने अठोट गर्दै जवर्जस्ती अघि बढिन। “अहिले सम्झिदा पनि मुटु नै जम्छ। जहाँ हात राख्यो त्यहीँ हात जम्ला जस्तो हुन्थ्यो , उनले भनिन। “
हिमालमा कसको याद आयो
अघि बढे सँगै उनले चुचुरो देखिन र त्यहाँ पाइला राख्न सफल भइन , टक्क चुचुरो मा उभिएर आकाशमा हेर्दै भनिन ” मैले मात्र होइन, हिमालले पनि मलाई चाहेको हो। ” यति खुसी लागेको थियो नि एक महिना लामो हिँडाईको थकान २ सेकेन्ड मा चेट भएको थियो मेरो , गाला राता – राता पार्दै मायाले भनिन।
साँच्चै भन्ने हो भने म बयान नै गर्न सक्दिन त्यो पललाई , मलाई संसारकै अग्लो मान्छे मै हुँ जस्तो लागेको थियो। त्यहाँ बाट मलाई प्याराग्लाइडिङ गर्ने मन साह्रै थियो तर गर्न सकिन।म पाइलट थिए भने कता बाट प्याराग्लाइडिङ गर्न मिल्छ भनेर ठाउँ चाहिँ हेरे , मुस्कुराउँदै उनले भनिन। आमा प्रति एकदमै आभारी पनि भए आमाले जन्म दिएकै कारण मैले सपना देखे अनि सपनालाई पछ्याउँदै हिमाल सम्मको यात्रा तय गरे।
निरुत्साहित गर्ने मान्छे सधैँ नै हुन्छन्। सगरमाथा पछि मैले ७ ओटै महादेशका अग्ला हिमालको यात्रा सकेर आइसके तर पनि खुट्टा तान्ने मान्छे उतिनै छन्। तर अरूको गफका पछाडि लागेर आफूलाई कमजोर गराइन मैले।
बरु तिनै कुरालाई मनमा राखे र गरेर देखाउने बाचा गरे। सर्वप्रथम त मैले एउटा भिजन बनाए , पछि त्यही भिजन लाई मिसन मा रूपान्तरण गरे अनि लागि परे मिसन पुरा गर्न। मेरो पछाडि कसले के भने मैले कहिले त्यसतर्फ ध्यान नै दिईन। त्यसैले नै म सिन्धुपाल्चोक र गुरुङ समुदायबाट मे २००८ मा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला बन्न सके।
हिमालको बाटो पहिल्याउँदा
एक पटक मात्र होइन मायाले जीवनमा बारम्बार विद्रोह र सङ्घर्ष गरेकी छिन् । हाम्रो समाजले महिलाका लागि होइन भनेर राख्ने मान्यताहरू तोडेकी छिन् ।
तिनै कुरालाई तोड्ने क्रममा उनले सानोमा जसलाई सगरमाथा सम्झन्थिन सोही हिमाल अर्थात् ग्याल्जेन हिमालसहितका ११ हिमाल रहेका जुगल हिमशृङ्खला को पहिलो सफल आरोहण गरेर दुनियाँलाई चकित बनाइदिइन। पहिचान भएका ११ हिमालमध्ये ८ हिमालहरू ६२५६ मिटर देखि ६९६६ मिटर अग्ला छन् ।
अन्ततः उनले अप्रिल १९, २०१९ का दिन बिहान ११ बजे ६१५१ मिटर उचाइको ग्याल्जेन हिमाल चढिन्। जुगल हिमशृङ्खला पहिलो मानव पाइला राखेर बाटो पहिल्याइदिने अर्थात् बाटो खोल्ने उनी पहिलो महिला हुन् ।
त्यतिमा मात्र मायाले आफूलाई सीमित राखिनन्। कोरोना कहरको असहज परिस्थितिमा पनि मायाको टोलीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा आफ्नै गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा रहेका थप नयाँ पर्यटन प्रडक्ट ल्याउन सफल भए ।
२०२० डिसेम्बर महिनाको अन्तिममा उनको टोलीले करिब २ साता लगाएर सिन्धुपाल्चोकको ५५५६ मिटर उचाइको युवा पिक, करिब ५३०० मिटर उचाइमा रहेको तिलमान पास र करिब ४३०० तथा ४४०० मिटर उचाइका पाँच पोखरी पिकको आरोहण गरेर तीन नयाँ साहसिक पर्यटन उपज बाहिर ल्याए । यसमा पनि लिडर र निडर बनेर अघि बढिन माया।
“आफ्नै गाउँको हिमाललाई उजागर गरेर त्यहाँका चेलीबेटी ले काम कै प्रलोभनमा परेर बेचिनु नपरोस् यहाँका युवा विदेशमा पलायन हुन् नपरोस् भन्ने मेरो लक्ष्य हो। आफ्नै ठाउँको पर्यटन क्षेत्रलाई अघि सारेर युवालाई स्वरोजगार बनाउने मेरो उद्देश्य हो , त्यही भएर नै नयाँ हिमाल खोल्न म सधैँ प्रतिबद्ध रहनेछु उनले भनिन।“
अब के गर्ने योजना छ
हिमाल मेरो मनमा बस्छ, अनि मेरो आत्मा हिमालमा। हिमाल दिन दिनै फोहोरको थुप्रोमा परिणत भइरहेको छ। हिमालमा लासहरू पनि उततिकै छन् र फोहोर को त् कुरै नगरौँ।
अनि हिमालमा बस्ने मानिसहरुले त्यही हिमालको हिउँ पग्लेर आएको फोहोर पानीलाई शुद्द मानेर खाने बाध्यता रहँदै आएको छ। अबको मेरो सपना हिमाल सफा गर्ने हो। अहिले म त्यही कार्यमा अभ्यास गरिरहेको छु।
मायाको नजरमा महिला
महिलाको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा हो। शिक्षा सँगै महिलाले आफ्नो अधिकारको लागि बोल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। हामी छोरीहरू रुनलाई , सहनलाई , सधैँ अरूको खुसीको लागि मात्र बाच्ने होइन। अब हामीले आफ्नो लागि बाच्नुपर्छ , आफ्नो इच्छा , लक्ष्यलाई चिनेर अघि बढ्नुपर्छ। हामीले हाम्रो लागि आफै फाइट गर्नुपर्छ ।
महिलाले चाह्यो भने गर्न नसक्ने कुनै चिज नै नरहेको मायाको अनुभव छ। फेरी आफूले गरेको विद्रोह सम्झिँदै माया भन्छिन् , मेरो विवाहको अघिल्लो रात धन्न म भागे । मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन , म भागे आफ्नो सपनालाई पुरा गर्न , म भागे आफ्नै घर बाट , आफ्नै हुनेवाला श्रीमान् माथि मलाई भर भएन। केवल भर भयो त मलाई आफ्नो !
बिहे कहिले गर्ने
लामो हाँसो हाँस्दै मायाले भनिन , जब मैले हिमाल आरोहण गर्न थाले तब मेरो गाउँको मान्छेले मलाई यो छोरी होइन छोरा रहिछे भन्न थाल्नुभयो। म छोरी नै हुँ बस छोराले गर्न सक्ने काम मैले पनि सक्छु भनेर आटेकी मात्र हुँ।
बिहे एक पटक गर्नुपर्ने चिज चाहिँ हो तर बिहे गर्ने पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि काम गर्दा गर्दै यति काममा व्यस्त भए कि बिहे गर्नुपर्छ जस्तो कहिले नै लागेन। भोलि का दिनमा मलाई बुझ्ने , मेरो पेसालाई अङ्गाल्न सक्ने , मलाई काम गर्न रोकटोक नगर्ने व्यक्ति पाए अवश्य बिहे गर्छु।
मैले जब २००८ मा हिमाल चढेर आए त्यस लगत्तै मैले मेरो गाउँको बैनीहरूलाई हिमाल चढ्ने तालिमहरू दिन थाले। धेरैलाई तालिम दिए , धेरै बहिनीहरूले अहिले आफ्नै कम्पनी खोलेर बस्नुभएको छ। त्यो समय साहसिक खेल पर्यटन अलि महँगो हुने भएर चाहे जति सबैलाई तालिम दिन सकिएन।
अहिले पनि तालिमको क्रमलाई निरन्तरता दिई नै रहेको छु। मुख्य शिक्षा, आत्मनिर्भर र सुन्दर वातावरण लाई मध्यनजर गरेर तालिम गराउने गर्दछु। त्यसो त् म हिमाल आरोहीलाई मात्र होइन पढ्न चाहने भाइ बहिनीलाई पनि सकेको सहयोग गर्छु। र बाचुन्जेल जति महिला दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सधैँ लागि पर्ने मेरो जीवनको २/४ ओटा लक्ष्य मध्येको एक हो।
८ हजार भन्दा माथिका हिमाल सफा गर्ने , आफ्नो गाउँको पर्यटन उकास्न काम गरिरहने पनि मेरो जीवनको अभिन्न उद्देश्य नै हो।
हिमालमा जादु छ , हिमालमै अध्यात्म छ , हिमालमै सुन्दरता पनि छ र हिम्मत गर्ने सबै महिलाले हिमाल चढ्ने सामर्थ्य राख्छन। हिमाल नै चढ्नु पर्छ भन्ने पनि छैन तपाई जे मा आफूलाई खुसी देख्नुहुन्छ त्यही कुराको प्राप्तिको लागि भिजन बनाउनुस् , मिसन बनाउनुस् र त्यसलाई पुरा गर्न आफैलाई बिर्सिदिनुस्।